တရားမဝင် USC FRESHMAN YEAR SURVIVAL GUIDE - နှုန်းထားများ
တရားမဝင် USC Freshman Year Survival Guide
ဂုဏ်ယူပါတယ်! သငျသညျရုံကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးတက္ကသိုလ်ခေါ်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှလက်ခံပြီးကြပြီ။ Duh, သင်ဝန်ခံချက်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, ဒါကြောင့်ယခုသင်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနေသည်၊ သင် Trojan အဖြစ်ပထမနှစ်တွင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်ရှာနိုင်သည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုရှာဖွေနေသည်။
ကံကောင်းတာကသင်အဘို့ Tab USC မင်းဖုံးထားပြီ USC ရဲ့တရားမဝင် Freshman တစ်နှစ်တာ Survival လမ်းညွှန်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
တစ် ဦး အိပ်ဆောင်ရွေးချယ်ခြင်း
တာ ၀ န်ယူမှုအနေဖြင့်၊ အိမ်များကိုမြန်မြန်သွားသောကြောင့်၊ အထူးသဖြင့်နယူး / မြောက် (သို့မဟုတ်) မြောက် (သို့မဟုတ်) Birnkrant တွင်နေထိုင်လိုပါက housing အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပါ။
အခန်းဖော်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်သည့်အခါကျပန်းတာဝန်ကျေပွန်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လူအများအပြားကလူတစ်ယောက်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုအသုံးပြုလိုကြသည်။
အဆိုပါသူတို့ကိုယ်သူတို့အိပ်ဆောင်တော်တော်လေးပျမ်းမျှအားဖြစ်ကြသည်။ New / North သည်စူပါလူမှုရေး၊ လေအေးပေးစက်မရှိသောပါတီရုံးခန်းဖြစ်ပြီးနှစ်ဆ၊ တစ်ကိုယ်ရေနှင့်အများသုံးရေချိုးခန်းများရှိသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးကျယ်လောင်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကအပြေးအလွှားစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များစွာရဲ့အများစုနေ့တွေကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီမှာမင်းရဲ့လူမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အများသုံးရေချိုးခန်းအမှန်တကယ် livable ဖြစ်ကြသည်။
Marks, Trojan နှင့် Pardee တို့သည် New / North နှင့်အလားတူ Vibe များရှိသည် - သူတို့သည် New / North သို့မ ၀ င်နိုင်သည့်လူများကိုသာနေရာချထားသည်။ အိပ်ဆောင်လေးခုစလုံးသည် Starbucks (ရေတာရှည်) နှင့် EVK (boo) ကျောင်းဝန်းရှိအထိတ်တလန့်ထမင်းစားခန်းနှင့်နီးသည်။ သို့သော် Figueroa တလျှောက်တွင်တည်ရှိခြင်းသည်ကျောင်းဝင်းပြင်ပရှိအစားအစာများစွာသည်အနည်းငယ်သာကွာဝေးသည်။
ငါတို့ခေတ်က Birnkrant ဟာတံခါးဖွင့်ထားတဲ့အထပ်ခုနစ်ထပ်နဲ့လူသိများတဲ့ပညာသင်ဆုအဆောင်ဖြစ်တယ်။ အများသုံးရေချိုးခန်းများနှင့်လေအေးပေးစက်များပါရှိသည်။ သို့သော်ကြမ်းပြင်တစ်ခုစီရှိလေ့လာရန်အခန်းငယ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်အထက်ဖော်ပြပါအဆောင်များကဲ့သို့ကျောင်းဝင်း၏ထောင့်တစ်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တူညီသောဒေသဆိုင်ရာအခွင့်အရေး / အားနည်းချက်များအားလုံးရှိသည်။
Parkside သည်ကျောင်းဝင်း၏အင်ဂျင်နီယာပိုင်းအပြင်အခြားမည်သည့်အရာမှမဆိုဝေးကွာပါသည်။ သို့သော်၎င်း၏ suites များ၊ လေအေးပေးစက်များနှင့်ထမင်းစားခန်းကြီးများနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန် ၁၀ မိနစ်အပိုထပ်ထည့်သင့်သည်။
fluor သည်လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည့် suite ပုံစံအဆောက်အအုံလည်းဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့များပိတ်ထားသည့်အချက် မှလွဲ၍ ကျောင်းဝင်းရှိဒုတိယအကောင်းဆုံးစားသောက်ခန်းမဖြစ်သည့်ကဖေး ၈၄ ၏ဘေးတွင်ဖြစ်သည်။ fluor သည်အသစ်နှင့်အလွန်နီးစပ်သည် USC ကျေးရွာ နှင့်အဓိက pluses နေသော Lyons အပန်းဖြေစင်တာ။
တစ် ဦး အိပ်ဆောင်၌အသကျရှငျ
Do: အမြဲတမ်းရေခဲမုန့်တွေသိုလှောင်ထားပါ၊ အပိုမီးတွေယူလာပါပြီ၊
မမေ့ပါနှင့်။ ရေချိုးခန်းဖိနပ်မေ့ပါ၊ သိုလှောင်ရန်နေရာအလုံအလောက်မရှိဟုစိတ်မပူပါနဲ့၊ တီဗီတစ်ချပ်ငှားရန်လိုသည်ဟုခံစားရသည်။
Parkside သည်ကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးထမင်းစားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်နေရာအနှံ့အပြားမှဝေးကွာသည်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်သည့်အချိန်အများစုကို EVK မှာမှီဝဲပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။
ထမင်းစားချိန်တွင်ထမင်းစားချိန်ဒေါ်လာထည့်ရန်အကြံပေးသည်။ Starbucks၊ Habit, Coffee Bean, Panda Express, Verde (Chipotle ၏နောက်ဆက်တွဲ)၊ CPK, Seeds, Nektar, Lemonade စသည့်ကျောင်းဝင်းတွင်းစားသောက်ဆိုင်များအတွက်ပိုက်ဆံဖယ်ထားခြင်းကထိုက်တန်သည်။
တကယ့်အစားအစာများကိုတစ်နေ့အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်စားရန်သေချာစေပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ချင်ပါတယ်သလောက်အတန်းများအကြားတစ် ဦး ချောကလက် croissant အမှန်တကယ်ရေတွက်ပါဘူး။
USC အားလုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုအကြောင်း, ခက်ခဲစိတ်ဓာတ်ကစားနှင့်ကခက်ခဲကစားရန်ကြွလာသောအခါ, 28 စိန့်အပေါ် USC ရဲ့ဂရိ Row အထွreme်အမြတ်တည်းဟူသောနန်းစံ။ ကျောင်း၏ပထမဆုံးရက်သတ္တပတ်မှာဂရိ Rush ဖြစ်သည်၊ အလွန်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သော်လည်းသင်မူကားဂရိဘဝကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းကိုရှာပါ။ တစ် ဦး sorority သို့မဟုတ်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားဆက်သွယ်ခြင်းကျောင်းဝင်းသေးငယ်စေရန်နှင့်သင့်ပထမနှစ်တွင်တစ် ဦး built-in လူမှုရေးလမ်းကြောင်းရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံအပိုပေါင်း နာမည်ကြီးတွေ ထနှင့်ပင်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားပါတီများမှာဖျော်ဖြေ။
ဒါကသင်၏အရာမဟုတ်ဘူးလျှင်, ချွေးကြပါဘူး။ Trojans ၏ ၂၀% ခန့်သာဂရိဘာသာသို့သွားသည်။ သင့်အစားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့်ကျောင်းသား org ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လှေပေါ်တွင်တစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲယောက်ျားတွေအတွက်၊ သင်သည်ပါတီပွဲသို့မ ဝင်၍ နေလျှင်၊ Row ပေါ်ရှိပါတီများသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်ကြမ်းတမ်းလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် Menlo ပါတီများသို့မဟုတ် L.A. ရှိစာသားများအားလုံးသည်သင်၏သွားရာလမ်းများဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် .ရာဝတီ နှင့် 9-0 သေချာပေါက်ထွက်စစ်ဆေးရန်ကျောင်းဝင်းပြင်ပအစက်အပြောက်ဖြစ်ကြသည်။
သင့်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်၏ GESM ကိုယူပါ ရှိသည် ပါဝင်ရန်
လူတိုင်းသည်ရုံးချိန်၏အားသာချက်ကိုယူရန်သင့်အားပြောလိမ့်မည်၊ သင်သူတို့ကိုဖယ်ပစ်ပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်ယင်းသည်မှားသည်။ ရုံးဖွင့်ချိန်များသည်သင်နေထိုင်လိုသောနေရာသို့တက်ရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်းပတ်ပတ်လည်မှာတင်သောအားလပ်ရက်အပြာစာအုပ်ရှိသည် ... သင်အဘယ်ကြောင့်အလွန်လျင်မြန်စွာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
angus နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော snogging ကနေရော်
သငျသညျ 8a.m. ကိုင်တွယ်ခဲ့ကြပေမည် အထက်တန်းကျောင်းကစာကောင်းကောင်းသင်ပေမဲ့သင်ဒီမှာတကယ်ပဲနောင်တရလိမ့်မယ်။
ဘောလုံး - ဘောလုံးရာသီဖြတ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းကစားပွဲတိုင်းကိုသွားပါ။ ဆောင်းရာသီတွင် Weekender ဟုခေါ်သောဤအရာသည်နှစ်များပေါ် မူတည်၍ Cal သို့မဟုတ် Stanford ဂိမ်းကိုမြောက်ကြည့်ရှုရန်မြောက်ဘက်သို့သွားသောအခါသင်နှင့်အတူသွားရန်ဗဟုသုတရှိသည့်အုပ်စုမရှိလျှင်သင်ဤသည်ကိုပထမတန်းကျောင်းသားတစ် ဦး အနေနှင့်ပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။ ။
အရာအားလုံး - ကစားခြင်းသည်သင်၏ကျောင်းသား ID နှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်အားတက်ရောက်ရန်အခမဲ့ရှပ်အင်္ကျီနှင့် / သို့မဟုတ်အစားအစာများပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညနေခင်းကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
USC ရှိကျန်းမာရေးဌာနသည်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်လုံးဝဖျားနာနေလျှင်သွားရန်သေချာပါစေ။ ရောဂါအမျိုးမျိုးကို freshman အိပ်ဆောင်များတွင်လှည့်ပတ်သည်နှင့်စို့, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းသည် Netflix ထက်တစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ အရေးကြီးသည်။
စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ကျောင်းသားများကျောင်းဝင်းပတ်လည်တွင်နံပါတ်တစ်လမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေဆုံးပုံစံမဟုတ်ပါ။ စကိတ်စီးခြင်းသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ကျောင်းဝင်းကိုသွားလာရန်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး နှင့်ထမင်းစားခန်းအများစုတွင်သင်၏ဘုတ်အဖွဲ့အတွက်ထိန်သိမ်းခြင်းရှိသည်။
USC နှင့် ပတ်သတ်၍ ထူးခြားသောအချက်တစ်ချက်မှာမနက် ၇ နာရီမှမနက် ၂ နာရီအထိသင်ကျောင်းဝင်းသုံးမိုင်ပတ်လည်တွင် Uber စီးနင်းခြင်းကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အားသာချက်မှအသုံးပြုပါ။
ထို့အပြင် Metro ပေါ်ရှိကုန်စည်ပြပွဲသည်သင့်အား Santa Monica သို့ဒေါ်လာ ၁.၇၅ နှုန်းဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သဖြင့်ကမ်းခြေတစ်နေ့တာကိုသွားရန်ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။
အဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့အတူ Trojan fam, fam! ဤအကြံပေးချက်များသည်တောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်း၌သင်၏ပထမဆုံးနှစ်ကိုကောင်းမွန်သောနှစ်ဖြစ်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။